Shiinaha OEM 30639780 iyo 30639781 ARRIMAHA KONTOROOLKA Soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha VOLVO -Z5148 | TANGRUI
Tayada Sare Shoogga Guga A ...
MAXAY MUHIIM U Yihiin CIIDAMADA KONTOROOLKA?
Hubka xakamaynta ayaa bixiya iskuxirid iyo barta udub dhexaad u ah hakinta gaarigaaga iyo jiiskaaga. Caadi ahaan ku xirida istiraatiijiga istiraatiijiga ah qaabdhismeedka jirka, xakamaynta gacmaha isugeynta kubbadaha iyo bushings kuwaas oo ka shaqeeya tandem si loo ilaaliyo raadinta gawaarida saxda ah iyo booska. Tusaale ahaan, gacanta xakamaynta hoose waxay gacan ka geysaneysaa dejinta booska dhererka iyo dhinaca dambe ee giraangirta inta uu gaariga socdo.
Xakamaynta hubka waxay iska caabbisaa xoogag fara badan oo rar ah, sida xawaareynta / bareegga, leexashada inta aad leexaneyso iyo culeyska gawaarida ee hakadka ku jira. Waxay sidoo kale leeyihiin shaqeyn dheeri ah oo ah dayactirka isku dheellitirka shaagagga. Tani waxay yareynaysaa buuqa la isugu gudbiyo, shoogga wadada iyo gariirka iyadoo la siinayo iska caabin dhaqdhaqaaqa ganaax aan loo baahnayn.
Waxay kuxirantahay qaabeynta hakin (Multi-Link, MacPherson, Double Wishbone), gacmaha xakamaynta waxaa lagaheli karaa hore iyo gadaal gadaal, labadaba booska sare iyo kan hoose.
Adoo ku xiraya bidix iyo midig ganaaxyada gaariga ilaa barta xasilinta, iskuxirayaasha xasiloonida waxay dayactirayaan giraangiraha isla joogga waxayna yareeyaan duubista jirka.
Maxaa ka dhigaya gacmaheena xakamaynta mid aad u weyn? Tangrui wuxuu siiyaa farsamoyaqaannada cirifka, iyadoo la cusbooneysiinayo qayb kasta oo gacanta ku jirta. Celcelis ahaan, rakibidda gacmaheena xakamaynta waxay qaadataa 30% waqti ka yar maxaa yeelay isku-xidhka kubbadda iyo duudduubyada ayaa horay loo sii rakibay. Injineeradeenu waxay diirada saaraan sameynta qeybahayaga si sahlan loo rakibo loona dhiso si loo bixiyo nolol adeeg dheeri ah. Ku shaqeynta ciqaabista baaritaanka cimri dhererka, waxaan ansaxineynaa nashqadeyn kasta oo cusub si loo hubiyo inaad hesho waxqabad aad ku kalsoonaan karto.
Xagga hore, Bidix, Hoose VOLVO XC90 [03-11]
Xagga hore, Midig, VOLVO XC90 Hoose [03-11]
Summad Wixii VOLVO
Shahaadada IS016949 / IATF16949
Hore: OEM BS1A-34-350 BS1A-34-300 ARIMAHA KONTOROOLKA Mazda -Z5147
Xiga: Hubka Xakamaynta Tayada Sare OEM 54500-3S000 Wixii HYUNDAI SONATA-Z5149
Hubka Kordhinta ee la Kordhiyay
Hubka Xakamaynta Birta
Hubka Xakamaynta Tubular
AWOODAHA KONTOROOLKA EE TOYOTA-Z5144
OEM TD11-34-300B iyo TD11-34-350B ARIMAHA KONTOROOLKA ...
Tangrui Customized gacanta gacanta ku habboon, waayo, ...
Hight Control Tayada Hubka OEM 54500-3S000 Fo ...
8E0407510A ARIMAHA KONTOROOLKA ee Volkswagen Passat-Z ...
Hubka Xakamaynta Xakamaynta Sare ee Fudud Fo ...
Naxdinta Nuugista Bolt, Gawaarida Hub, Naxdinta Rubber Rubber, Jabinta Steering Front, Wadajirka Kubadda Tire, Hood Shooga Nuugista,